Izindaba - Kuthuthukiswe imikhiqizo emisha
Amasilinda amasondo e-Daihatsu 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 kanye ne-clutch master cylinder 31410-87322 sekwenziwe ngoSepthemba, 2020. IDaihatsu uhlobo olusha lomkhiqizo wethu, luhle kakhulu.
Ukubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha kungumphumela wesidingo sokwenza imikhiqizo emisha uma ibhizinisi lizophila. Ngamanye amagama, ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha kuhlobene nekhono lebhizinisi lokuhlala lincintisana kanye nokuphila isikhathi eside kwebhizinisi elinjalo. Noma yiliphi ibhizinisi elingaqapheli ukubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha ngeke lihlale isikhathi eside njengomphumela weqiniso lokuthi ibhizinisi liphathelene nokwenziwa kwezinto ezintsha noshintsho, okwenza kudingeke impela ukuthi amabhizinisi azivumelanise nalezo zinguquko ukuze ahlale efanelekile. Ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha kungahle kuhloselwe ekucabangeni komqondo omusha maqondana nolayini omusha ngokuphelele wemikhiqizo okwamanje engekho emakethe, noma kungahle kuhloswe ngokuthuthukisa imikhiqizo okungenzeka isivele ikhona emakethe. Noma ngabe yikuphi, ukwenziwa kwemikhiqizo emisha kuyingxenye ebalulekile yokusetshenziswa kwamasu ebhizinisi yizinkampani.
Umfanekiso wokubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha ungabonakala endaweni yenguquko kusuka ezincwadini zomzimba kuya ezincwadini ze-e. Ezinye izinkampani ezizakhele idumela ngisho nenkampani yazo yonke ekuthengisweni kwezincwadi zomzimba zisongwa ngokushesha ngenxa yokuthi zehlulekile ukubona ukubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha. Lezi zinkampani azizange zihambisane nezinguquko kwezinye izindawo zemakethe, njengokuqalwa kobuchwepheshe okwenze kwaba lula kakhulu ngabantu ukulanda izincwadi kudivayisi kunokuba bathenge incwadi ebonakalayo. Ezinye izinkampani ezamukela ukwenziwa kwemikhiqizo emisha zilindele lolu shintsho futhi azigcinanga nje ngokwenza ukuthi amakhasimende akwazi ukulanda izincwadi kwiWebhusayithi yazo, kodwa futhi ahlanganise lokhu kulanda nabafundi bazo abasebenzisa i-elekthronikhi, okwenza kube iphakethe eliphelele. Lokhu kuqonda kokubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha kugcine lezo zinkampani zifanelekile naphezu kobuso obuqhubekayo bezobuchwepheshe kanye nokuthandwa noma okuthandwa amakhasimende. Omunye umfanekiso wokubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha usendaweni yama-smart phone lapho ezinye izinkampani zikwazile ukuzimisa njengabaholi bezimakethe ngenxa yokuthi zihlala zihola emikhiqizweni emisha. Izinkampani ezinjalo zihlala ziveza nemikhiqizo emisha ngezikhathi ezithile, zibheka ngendlela eyisimanga lapho imikhiqizo yazo emakethe isivele ifinyelela ekugcineni komjikelezo wokuphila komkhiqizo wayo. Ngokufaka imikhiqizo emidala ngemikhiqizo emisha, bayakwazi ukugcina intshisekelo yamakhasimende nokwenza umkhiqizo wabo nenkampani yabo ifanele.